कन्सोल र गोल ऐना प्रस्तुत गर्न र हल सजाउन | बेजिया
कन्सोलहरू र गोल ऐनाहरू प्रस्तुत गर्न र हल सजाउन
कन्सोल र राउन्ड मिररले ठूलो टेन्डम बनाउँछ जसको साथ हल सुसज्जित र सजाउनुहोस्। कन्सोल फर्नीचरको हल्का टुक्रा हो, भित्ताको नजिक बनाइएको टेबल, सामान्यतया दराज बिना र भुइँमा तुरुन्तै दोस्रो बोर्डको साथ, जसले धेरै ठाउँ लिँदैन।
कन्सोलमा तपाईले मात्र गर्नुपर्नेछ गोल ऐना थप्नुहोस् र तपाईंको हल आरामदायक बनाउन केही सामानहरू। हलमा ठूलो अतिरिक्त भण्डारण ठाउँ चाहिनेहरूका लागि यो उत्तम प्रस्ताव होइन, तर तिनीहरू आइपुग्दा चाबीहरू राख्नको लागि ठाउँ चाहिने सबैका लागि, मेलबक्सबाट सङ्कलन गरिएका पत्रहरू र पन्जा वा स्कार्फहरू।
1. f। भित्तामा झुकेर बनाइएको टेबल, सामान्यतया दराज बिना र भुइँमा तुरुन्तै दोस्रो बोर्डको साथ
यो कसरी RAE कन्सोलले वर्णन गर्दछ, हलहरूमा फर्निचरको एक धेरै सामान्य टुक्रा। फर्निचरको एउटा टुक्रा जुन बेजियामा हामी विश्वास गर्छौं कि सजाउनको लागि सधैं राम्रो प्रस्ताव हो, विशेष गरी, सबैभन्दा सानो वा साँघुरो हलहरू। किनकि यी तालिकाहरूमा सामान्यतया 40 सेन्टिमिटरभन्दा बढी गहिराइ हुँदैन।
बजारमा धेरै कन्सोलहरू मध्ये त्यहाँ दुईवटा छन् जुन तपाइँ कहिल्यै गलत हुनुहुन्न, विशेष गरी यदि तपाइँ शर्त लगाउनुहुन्छ समान को न्यूनतम संस्करण। र यी कन्सोलहरू के हुन्? ती पूर्णतया काठबाट बनेका र काठको फलक र धातु संरचना भएकाहरू। दुबै सबै वातावरणमा फिट हुन्छन्, यद्यपि थोरै सूक्ष्मताहरूको साथ जुन तिनीहरू प्रत्येकको लागि अधिक उपयुक्त छ।
काठको कन्सोलहरू। काठको कन्सोलले हलमा न्यानोपन प्रिन्ट गर्छ, चाहे यसको शैली जस्तोसुकै होस्। प्राकृतिक काठ र जैविक आकारहरू बनाइएका ती घरको देहाती शैली बढाउनको लागि उपयुक्त छन्। जबकि सीधा रेखाहरू भएका स्पष्टहरू क्लासिक र आधुनिक वातावरण दुवैलाई सजाउनको लागि उत्तम विकल्प हुन्।
धातु संरचना र काठको सतह संग। धातु संरचनाले यी कन्सोलहरूलाई औद्योगिक हावा दिन्छ, साथै तिनीहरूको हल्कापनलाई प्रभाव पार्छ। तिनीहरू आदर्श छन्, त्यसैले, दुबै देहाती र आधुनिक शैलीहरूमा धेरै साँघुरो हलवेहरू सजाउन।
गोलाकार ऐना प्रचलनमा छन् र तिनीहरू हल सजाउनको लागि मात्र होइन, तिनीहरू बाथरूममा पनि धेरै आकर्षक छन्। यसको गोलाकार आकारले कन्सोलको सामान्यतया आयताकार रेखाहरूलाई नरम बनाउँछ, हाम्रो घरहरूमा प्रवेशद्वारलाई अझ रमाइलो बनाउँछ।
को कालो फ्रेम डिजाइन तिनीहरू यस प्रकारको ऐना सजाउनको लागि सबैभन्दा लोकप्रिय छन् र, निस्सन्देह, उत्तम विकल्प यदि तपाइँ फर्नीचरको मुख्य टुक्राको रूपमा कालो धातु संरचनाको साथ कन्सोलमा शर्त लगाउनुहुन्छ। जे होस्, हालका वर्षहरूमा, काठ वा बाँसको फ्रेमहरूले उत्कृष्ट प्रख्यातता प्राप्त गरेको छ, अधिक क्लासिक र परिष्कृत वातावरणमा मनपर्ने भएको छ।
के तपाइँ एक minimalist र समकालीन वातावरण खोज्दै हुनुहुन्छ? त्यसपछि सरल र विवेकी फ्रेमहरूमा शर्त वा तिनीहरूलाई छोड्नुहोस्। हो, आज तपाईलाई फेला पार्न कुनै समस्या हुनेछैन गोल फ्रेमलेस ऐना। तिनीहरू सबैभन्दा लोकप्रिय छैनन् तर तिनीहरू एक उत्कृष्ट विकल्प हुन्, पहिले नै उल्लेख गरिएको वातावरणको अतिरिक्त, ती ठाउँहरूमा जहाँ तपाईं फर्निचरलाई सबै प्रमुखता दिन चाहनुहुन्छ।
केही सामान र सामानहरू पोशाक पूरा गर्न पर्याप्त हुनेछ। तिनीहरू प्रत्येक घर र प्रत्येक परिवारको आवश्यकता अनुसार फरक हुनेछन्। तर सामान्य मा, फर्नीचर को एक टुक्रा कहिल्यै चोट लाग्दैन। कुञ्जीहरू छोड्न कटोरा वा टोकरी, ताजा फूलहरू र एउटा वस्तु जुन तपाईंलाई मनपर्छ वा तपाईंको लागि यो ठाउँ थप व्यक्तिगत बनाउनको लागि अर्थ छ।
यदि कन्सोल पर्याप्त लामो छ भने, तपाइँ बत्ती पनि थप्न सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईंलाई आफ्नो पन्जा वा स्कार्फको लागि जाडोमा भण्डारण ठाउँ चाहिन्छ भने, कन्सोल अन्तर्गत केही थप्न नहिचकिचाउनुहोस्। तरकारी फाइबर टोकरीहरू। के तपाई केहि सल्लाह चाहनुहुन्छ? यदि तपाईंको विचार टोकरीहरू राख्ने हो भने, तल्लो शेल्फको साथ टेबलमा शर्त लगाउनुहोस्; तपाईं समर्थन गर्न सक्नुहुन्छ टोकरीहरू यसमा र प्रत्येक पटक तिनीहरूलाई सार्न बिना भुइँ सहज रूपमा सफा गर्नुहोस्।
के तपाईलाई कन्सोल र राउन्ड मिररको यो संयोजन मनपर्छ र हल सजाउन र तपाईको घरमा स्वागत छ?
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » सजावट » फर्नीचर » कन्सोलहरू र गोल ऐनाहरू प्रस्तुत गर्न र हल सजाउन
यदि बच्चा लगातार रिसाएको छ भने के गर्ने?
रक्त शर्करा नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्ने खानाहरू